Uchwepheshe we-Semalt: Amathuluzi amahlanu Wokumisa ama-Spam Amazwana Ku-WordPress
Amazwana wogaxekile ayiqiniso elibuhlungu, futhi ama-blogger azogxila ngombhalo omkhulu wamazwana angenalutho ayithola ngosuku. Noma kunjalo, i-WordPress yiyona ndlela yokuphatha okuqukethwe okungcono kakhulu ingasiza ukuqeda ukuphawula kogaxekile. Uma ushiye le nkinga engalindelwe, amazwana ogaxekile angathola i-database yebhulogi yakho futhi angakwenza uvinjelwe kwimiphumela yenjini yokusesha unomphela - firmenumzug mitarbeiter des.
Lapha uJack Miller, onguchwepheshe oholayo Semalt , ukhulume ngamathuluzi okuma amazwana ogaxekile ku-WordPress.
Ungakwazi ukufinyelela kalula ku-Akismet ku-Directory yakho ye-Wordpress Plugin. Kuyinto i-plugin engabizi futhi ewusizo, efika ngokushesha. Ethuthukiswe yi-Automattic, le plugin inamandla kakhulu futhi iza nezinketho eziningi. Ivimbela ugaxekile futhi ifaka amashadi ambalwa ukuhlola ikhwalithi yamazwana isayithi lakho elitholayo. Ibuye inezinye izinhlelo zokuzihlola zogaxekile zokuzihlola futhi ikuvumela ukubeka amazwana ku-server ye-Akismet, ngaphandle kokunikeza isayithi lakho ukubuka okungajwayelekile futhi okuyiziwula. Ngokumangazayo, u-Akismet uhamba nokuhlola okungaphezu kuka-40k ogaxekile njalo ngenyanga futhi uphelele amabhulogi abo kanye namawebhusayithi angewona inzuzo.
2. I-plugin ye-WP-SpamShield Anti-Spam:
3. Inyosi Yokulwa Negaxekile:
Le plugin itholakale ku-directory ye-Wordpress Plugin futhi inezinhlelo ezingaphezu kwezigidi ezimbili zokufaka okusebenzayo kuze kube manje. Le plugin iye yaphakanyiswa yi-WordPress umsunguli uMat Mulweweg futhi ayikho izindleko. Iyakhathalela amakheli e-IP adlulisa i-malware ku-intanethi, amathrekhi amazwana akho, futhi ahlolisise ikhwalithi lalawo mazwana. Izophinde ikubonise izibalo ezinemininingwane yamasonto onke kanye nemisebenzi yogaxekile ukuze ukwazi ukuthola ukuthi ibhulogi yakho iya kuphi.
I-CleanTalk ingenye ye-plugin ye-premium epholile kunazo zonke, ehamba phambili futhi eyaziwa kakhulu kwi-intanethi futhi inikeza ngezinsizakalo ezihlobene nokuvikelwa kubasebenzisi be-blogger nabaphathi bewebhu. Ivimbela ukuphawula kogaxekile, ukubhaliswa okungemthetho, nokubhaliswa, futhi isebenzisa i-smart algorithm ukuthola wonke ugaxekile kuwebhusayithi yakho. Igcina lawo mazwana ogaxekile ku-database ye-Clean Talk bese isuswa uma ingasetshenziswa.
5. I-WordPress i-Zero Spam:
Ngenye ye-plugins elula futhi ephelele yokuvimbela i-spam kuze kube yimanje.
Ungakwazi kalula ukugcina ibhulogi yakho ye-WordPress noma iwebhusayithi ihlanzekile, igcinwe futhi ihlelwe ngalezi plugin eziphelele.